2013 Treadmill Zita: Merit 715T Treadmill Chete $ 349.99
musha » Amazon » Merit 715T Treadmill Chete $ 349.99 ne FREE Shipping
Kubudirira kwehutano Kunopa 2013 Merit Fitness Treadmill Kutengwa kubva Amazon
Merit Fitness 715T Plus Treadmill Yakatengeswa Iye zvino nokuda kwe $ 349.99 chete ne FREE Shipping
The Merit 715T Kuwedzera treadmill kunoita kuti zvive nyore kutanga chirongwa chekugadzirira mumba. I715T Plus treadmill yakagadzirwa nepamusoro-soro 2.5 THP (1.5 CHP) motokari yemotokari. Chigadziro chinoita kuti zvive nyore kuisa nguva yako yekushanda. Iwe unogona kuenda kubva ku0 kusvika ku10 mairaira paawa. Zviri nyore kutarisa basa rako rekushanda nekuvonga nekuda kwetatu-hwindo rekuratidzira LED, iyo inofamba nguva yako, kureba, kukurumidza, makoriri akapiswa, nezvimwewo.
The Merit 715T inopawo yakawanda 18-by-47-inch inoburitsa nzvimbo inopa mafambiro akawanda kana nzvimbo yekuchengetedza, pamwe chete neAerosoft kukandira nzira pasi pebhanhire iro rinovhara tsoka dzako nemakumbo kubva pakutyisa.
Zvimwe zvinhu zvinosanganisira zvirongwa zvekushanda kwe 4 preset, bhuku rePosition 3 rinotarisa kugadziriswa (kubva ku0 kusvika ku5 muzana), chikwata chekufungidzira kwechigunwe, uye chimiro chekusimudza kuti zvive nyore kuchengetwa. The 715T anoremekedza uwandu hwemamiriyoni e250 uye anotakura chirongwa cheupenyu hwese pamugariro uye gwaro regore rimwe chete pamotokari.
Dzvanya Apa Kuti Utenge Merit Fitness 715T Plus Treadmill
* Price of $ 349.99 inonzi yakajeka seya 6 / 30 / 13 2: 33 PM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja
&lt;A HREF=XCHARXhttp://ws-na.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_sw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fonlireba-20%2F8002%2F71419813-2971-4004-8d23-ba9b2649407f&amp;Operation=NoScriptXCHARX&gt;Amazon.com Widgets&lt;/A&gt;
June 30, 2013 FitnessRebates Amazon, makodzero, Treadmills No Comment	$ 349.99 Treadmill Free Shipping, 2013 Treadmill Kutengeswa, 715T Plus Treadmill, Merit Fitness Treadmill Kutengeswa, Merit Treadmill 715T